ny zavatra tokony ho fantatsika mba hahatakatra Meksikana ny vehivavy
Fomban-drazana matanjaka kokoa noho ny na inona na inona ary izany no nanampy antsika hiaro ny sasany mahaliana ny fahazarana. Olona hilaza hoe tsy tena mino ny zavatra toy izany foana fa manao izany ihany.
Bevohoka ny vehivavy mitafy ny mena kely kofehy, na ny fiarovana ny pin tia ny atin’akanjo na oviana na oviana no misy ny takonam-bolana feno mba hiarovana ny zaza ao am-bohoka avy ny maleficence. Ny vehivavy ihany koa miezaka ny hanana ny overstock amin’ny mena sy mavo panties izay maneho ny faniriana ho an’ny tena fitiavana na ny vola nandritra ny Taona Vaovao (arakaraka ny amin’izao fotoana izao ilaina). Ary misy sasany hafa izay buy ny sary na ny mampiseho an’i Saint Anthony ny Padua, nametraka azy teo amin’ny alitara miaraka amin’ny labozia, ka apetraho eo ambony ambany mandra-pahatongan’ny andro ny fahagagana no mitranga, ary izy ireo dia hahita ny tena fitiavana.
Yep, fa ny tena extorting olomasina
Ny ara-tsaina holatra vokatry no ningain-dry zareo Meksikana ny reny dia azo antoka fa ao anatiny ny tsirairay amintsika, saingy tsy midika izany fa tsy afaka manana ny asany fifandraisana amin’izy ireo toy ny grownups. Raha ny zava-misy, Meksikana ny lehilahy sy ny vehivavy hanana mafy miraiki-po ny reny sy ny fianakaviana, fa ny fifandraisana dia tena mitovy ho an’ny lahy sy ny vavy. Ny fifandraisana eo amin’ny reny sy ny zanany vavy fiovana eo feno fitiavana ary feno fankahalana ny havany mora. Ny akaiky kokoa izy ireo, ny matanjaka kokoa ireo fiovana ho tonga ary ny tena mahazatra ny manao dika vilana ny be pitsiny ny fatorana mifototra amin’ny malina fandinihana. Mieritreritra azy ireo toy ny namana tsara indrindra izay indraindray kely ny tsy fifankahazoan-kevitra mampatahotra sy manaitra ny tsy fifankahazoan-kevitra. Tsy misy iray lamina momba ny habetsaky ny makeup Meksikana ankizivavy manao. Zavatra eo discrete sy antonony tiany indrindra, fa downright clownish fomba mahazatra fahitana nandritra ny maraina dia fanaovana dia mivezivezy. Inona ireo vehivavy no mizara ao mahazatra dia ny mandroso fahaiza-manao ny rehetra mitambatra. Avy ny fahaizany mampiasa ny eran’ny sotrokely ny eyelash curling ny mahagaga fahafahana hisarika ny tonga lafatra eyeliner-dalana nandritra ny bumpy fiara fitateram-bahoaka, Meksikana vehivavy mahafantatra makiazy. Tiako ihany koa ny te-hahafantatra ny faharetana ireo vehivavy izay hanova ny tsirairay ny hoho ho kely sangan’asa, dia raha ny ankamaroan ny fotoana farany mitady kely toy ny fampakaram-bady ny mofo. Ary tsy azoko manondro fa ny olana dia ny Meksikana manana ny tena levitra. Meksikana ny vehivavy dia ny tsara indrindra rehefa tonga an-trano fanafody: tantely, voasarimakirana dite na mullein ho mangatsiaka, chamomile mba hanamaivana ny kibo fanaintainana sy hanampy anao torimaso, valerian ho tony ny saina, ary ny sasany aloe na inona na inona hafa.
Na inona na inona mahatohitra ny herin teas ary herbal infusions
Izy ireo ihany koa ny efa mahazatra isaky ny azo atao tsara ny lanja-fampihenana ny drafitra. Ny volana sakafo, ny grapefruit sakafo, ny apple, ny sakafo, ny marina kisendrasendra-ny fe-potoana sakafo no anarany izany, dia angamba efa nanandrana izany. Eo ambanin’ny toe-javatra mahazatra, dia miezaka ho be fitiavana indrindra, fikarakarana sy fitiavana ny vehivavy eto amin’izao tontolo izao. Na iza na iza izay, na dia nanana sipa Meksikana dia mahafantatra fa ny mampiseho ny firaiketam-po dia afaka ho fanakendana, izay no tena tsara. Mitsangàna, izay tsy te-ho asphyxiated amin’ny alalan’ny fitiavana sy ny fitiavana. Meksikana ankizivavy manana toetra rehetra na iza na iza no te-mandra-pahatongany mahazo manontany anao, mazava ho azy. Firehetam-po fotsiny dia fomba iray hafa ny hoe haingana, mora tezitra. Ela na ho haingana ianao hahita misy maizina side fa lurks ao ambadiky ny ireo manja-maso. Raha Meksikana vehivavy mety ho voafaritra ao amin’ny teny iray, ny teny ho falifaly. Izy ireo namana, sariaka, mafy, ary foana amin’ny toe-po ho an’ny sasany tsara voly. Tovovavy ao Meksika dia mandihy ny alina izy nomena ny fahafahana sy ny fahafahana nampitombo azy. Aho tsy manome tsiny ny vehivavy Meksikana ho an’ny manontolo ireo hevitra raiki-tampisaka, fa izy ireo no mizara ny ampahany lehibe ireo fahatsapana ho meloka tamin’ny sasany ny fahazarana. Ohatra, misy fahasamihafana lehibe ho azy ireo eo ho vonona ny handeha avy, ary raha ny marina ho afaka manao izany. Rehefa ny sipa Meksikana milaza aminao izy napetraka rehetra izy afa-tsy ny fanekena ny faharetana. Raha toa ka tsy mbola nanapa-kevitra izay kiraro izy ny manao na tsy naka azy mandrakizay-mahatoky poketra, dia mbola tsy vonona. Meksikana vehivavy efa ekena ara-tantara noho ny mahery, toetra sy rebelliousness. Miaina ao anatin’ny fiaraha-monina amin’ny lahy sy ny vavy matanjaka ny olana efa nisy fiantraikany ny toetra amam-panahy ny vehivavy Meksikana ry zareo assertive ary tsy matahotra ny haneho ny heviny an-kalalahana, sy ireo no antony roa mahatonga anao tsy te-sipa Meksikana ho toy ny fahavalo
← Webcam Mexico an-tserasera. Hafakely ny Paradisa ny masonao
Mahazatra amin'ireo Meksikana te-hihaona aminao →